Global Voices teny Malagasy » Syria: Ny Revolisiona sy ny Toekarena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Jona 2011 13:29 GMT 1	 · Mpanoratra Yazan Badran Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Fanoherana, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay momba ny Hetsi-panoherana ao Syria 2011 .
Ny Zoma teo (24/06), nanamarika ny andro faha 100  hatramin'ny nanombohan'ny hetsi-panoherana i Syria. Lasa fomba fanao isaky ny zoma ny hetsi-panoherana. Saingy misy endriny hafa ihany koa ilay tantara. Nandritra ny 100 andro dia kofona koa ny toekaren'ny firenena. Tsy nandroso tsy nihemotra ny toekarena ary ny vanim-potoanan'ny fizahantany vao mitsidika io dia tsy mamelom-panantenana. Fanampin'izany, an'aliny ireo Siriana velon'ahiahy ka namadika ny tahiriny hiala amin'ny “Syrian pounds” hanjary dolara amerikana na Euros, nahatonga ny vola Siriana hizaka tsindry mavesatra. Ny marina dia tao anatin'ny 48 ora voalohany tamin'ny volana Aprily, very 10 isan-jato tamin'ny sandany teo aloha ny vola Siriana, niteraka tahotra ny amin'ny hisian'ny fitotongànana goavana.
Maro amin'ireo ao anatin'ny fanoherana aza no miafa mafy hahatongavana amin'izany. Ny tohankevitr'izy ireo dia ny hoe ny fitontonganan'ny toekarena dia ho lefona ivoho hanaisotra ny mpitondra, ary hanosika ny rehetra hifototra hanohitra azy. Ny sasany, na izany aza, dia kely finoana ihany amin'izay foendri-dalao izay. Ilay Siriana bilaogera, nuffsilence, dia miteny hoe :
Syriana mpahay toekarena, sady matetika no manoratra amin'ny bilaogin'ny Prof. Joshua Landis, Syria Comment, Ehsani, dia niezaka ny hamaly an‘ireto fanontaniana ireto  mikasika ny hoavin'ny toekarena Siriana:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/06/28/18816/
 nanamarika ny andro faha 100: https://globalvoicesonline.org/2011/06/24/syria-blogging-day-for-syria/
 dia miteny hoe: http://nuffsilence.posterous.com/the-economy-collapse-scenario
 ‘ireto fanontaniana ireto: http://www.joshualandis.com/blog/?p=10461